Hesekiel 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
26 Afe a ɛto so dubiako, ɔsram no da a edi kan no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, Tiro+ adi Yerusalem+ ho fɛw sɛ, ‘Ahaa, wɔabubu+ aman apon no.+ Afei wɔbɛdan aba me nkyɛn. Wɔasɛe no yi, mɛyɛ mã.’+ Eyi nti, 3 nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Tiro, me ne wo anya asɛm, na mede aman pii bɛba wo so+ sɛnea po bɔ n’asorɔkye ba no.+ 4 Na wɔbɛsɛe Tiro afasu+ adwiriw n’aban agu,+ na mɛwerɛwerɛw ne ho dɔte ma wayɛ ɔbotan kwaboo. 5 Ɔbɛdan beae a wɔhata asau+ wɔ po mfinimfini.’+ “Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni, ‘Me na maka, na amanaman bɛfa no sɛ asade. 6 Na nkuraa-nkuraa a atwa ho ahyia nyinaa bɛtotɔ nkrante ano, na nnipa behu sɛ mene Yehowa.’+ 7 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mɛma Babilon hene Nebukadresar, ahene mu hene no,+ afi atifi fam aba Tiro so.+ Na ɔde apɔnkɔ+ ne nteaseɛnam+ ne apɔnkɔsotefo ne asafodɔm+ kɛse na ɛbɛba. 8 Nkuraa-nkuraa a atwa wo ho ahyia nyinaa bɛtotɔ nkrante ano, na ɔbɛto akoban na wasi pempe+ atwa wo ho ahyia na ɔde kyɛm kɛse aba wo so; 9 na ɔde n’afiri bedwiriw w’afasu na ɔde n’akode abubu w’aban. 10 N’apɔnkɔ manyamanya no bɛma mfutuma akata wo so.+ Na apɔnkɔsotefo ne ntwahonan ne nteaseɛnam bɛma w’afasu awosow, bere a ɔfa w’apon mu ba wo so te sɛ kurow a abubu ma akwan abɛdeda mu no. 11 Ɔde n’apɔnkɔ nan betiatia wo mmorɔn so akwan nyinaa so.+ Na ɔde nkrante bekunkum wo nkurɔfo na w’ahoɔden adum ahwehwe fam. 12 Wɔbɛfa w’ahode+ na wɔafom w’aguade,+ na wobebubu w’afasu na wɔadwiriw w’adan fɛfɛ no agu. Na wɔde w’abo ne wo nnua ne wo dɔte begu nsu mu.’ 13 “‘Mɛma wo dwonto gyegyeegye no agyae,+ na wɔrente w’asanku nne bio.+ 14 Mɛma woayɛ ɔbotan kwaboo+ na woadan asau hatabea.+ Wɔrenkyekye wo bio; me Yehowa na maka,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.+ 15 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ Tiro ni, ‘Sɛ wɔte w’asehwe, na wɔn a wɔapirapira no penepene, na wokunkum wo mu nnipa a, nsuano aman renwosow+ anaa? 16 Ɛpo so abirɛmpɔn nyinaa befi wɔn agua so+ asisi fam,+ na wobeyiyi wɔn ntade nguguso ne wɔn nwentama agu hɔ. Na wobefura ahopopo na wɔatenatena fam.+ Wɔn ho bɛpopo bere biara+ na wɔatɛɛ wɔn anom ahwɛ wo. 17 Na wobetwa wo ho kwadwom+ aka akyerɛ wo sɛ: “‘“O hwɛ sɛnea woahwe ase, kurow a po sofo bɛtenaa wo mu,+ kurow a wɔkamfo no, kurow dennen a ɛda po so,+ ɔno ne wɔn a wɔtete mu, wɔn a wɔmaa asase sofo nyinaa bɔɔ hu no! 18 Ɛda a wobɛhwe ase no, nsuano aman ho bɛpopo. W’awiei bɛma po mu nsupɔw awosow.”’+ 19 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Sɛ mema wodan amamfõ te sɛ nkurow a obiara nte mu, na mema subun kata wo so na nsu pii yiri fa wo so a,+ 20 mede wo bɛka wɔn a wɔrekɔ adamoa mu no ho akɔka tetefo ho,+ na mɛma woatena asase ase tɔnn,+ te sɛ tete amamfõ so, wo ne wɔn a wɔrekɔ adamoa mu no,+ na obiara rentena wo mu bio. Na mesiesie ateasefo asase so+ fɛfɛɛfɛ. 21 “‘Mɛma ehu atɔ wo so+ na worentena hɔ bio; nnipa bɛhwehwɛ wo,+ nanso wɔrenhu wo da,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”